I-China Atmospheric ne-Vacuum distillation Unit Umkhiqizi kanye Nomhlinzeki | Dongfang
Izici 1. I-Atmospheric ne-vacuum distillation yisinyathelo sokuqala sokucutshungulwa ongahluziwe, sidlala indima ebalulekile ekugelezeni okuphelele kokugcwaliswa. Abasebenzisi bangathola ngokuqondile uphethiloli, i-jet petrol, uwoyela okhanyayo udizili, uphethiloli we-diesel osindayo, uwoyela we-vacuum, njll. Ngemuva kokucubungula uwoyela ongahluziwe ngokusebenzisa leyunithi yokugcotshwa kwezulu ne-vacuum. 2. Omunye umsebenzi wezithando zezulu lokuhamba kwezulu unikeza izinto zokusetshenziselwa ukucubungula phansi, njengokucwilisa okuphakelayo, i-ethylene pyrolysis feedstock, iFCC feedsto ...
1. I-Atmospheric ne-vacuum distillation yisinyathelo sokuqala sokucutshungulwa, lapho sidlala indima ebalulekile ekugelezeni okuphelele. Abasebenzisi bangathola ngokuqondile uphethiloli, i-jet petrol, uwoyela okhanyayo udizili, uphethiloli we-diesel osindayo, uwoyela we-vacuum, njll. Ngemuva kokucubungula uwoyela ongahluziwe ngokusebenzisa leyunithi yokugcotshwa kwezulu ne-vacuum.
2. Omunye umsebenzi wezithando zezulu lokuhamba kwezulu unikeza izinto zokusetshenziselwa ukucubungula phansi, njengokucwengisisa okuphakelayo, isithamo sokudla se-ethylene pyrolysis, iFCC feedds, i-hydrocracking feedds, njll.
3. Izinhlobo ezintathu zeyunithi lomoya kanye ne-vacuum distillation iyatholakala: uhlobo lwamafutha, uhlobo lokuthambisa uwoyela kanye nohlobo lwamakhemikhali. Azinamehluko obalulekile ngaphandle kokucaciswa kokuhlukaniswa. Iyunithi yohlobo lwe-Fuel-lubricant inezinqubo eziyinkimbinkimbi kakhulu kunezinye izinhlobo ezimbili.
I-3.5 million t / y I-Atmospheric ne-Vacuum distillation Unit
Izigidi ezingama-5 t / y i-Atmospheric ne-Vacuum distillation Unit
Izigidi ezingama-8 t / y i-Atmospheric ne-Vacuum distillation Unit
Izigidi ezingama-3 t / y i-Atmospheric ne-Vacuum distillation Unit
Ngaphambilini: Ifenisha Yokupheka
sesitimela Consulting , Rail Transit , Chill Water Machine , Ukunciphisa Block , Ironworks , Heater Ukubika Inkinga YeWindows Isigaba ,